Emraan Hashmi Oo Jilaya Markii Ugu Horeysay Filim Ay Sameysay Shirkada UTV | Hoyga Arimaha Bulshada
Emraan Hashmi Oo Jilaya Markii Ugu Horeysay Filim Ay Sameysay Shirkada UTV
Guulihii ay gaareen filimadii ugu dambeeyay ee actarkaanu jilo gaarahaan “ONCE UPON A TIME IN MOMBAY, iyo DIRTY PICTURE” waxa ay u horseedeen Emraan in uu la shaqeeyo shirkada “UTV” isagoo hogaamiye ka noqonaaya filim lagu magacaabo “Ghanchakkar”.
Filimka ayaa ka sheekeynaaya nin jecel waxyaabaha nolosha ku wanaagsan kedibna isku dayaaya in uu xado wax kastoo uu damco, Emraan Hashmi oo ka hadlaya sida uu u arko filimka, ayaa yiri waxa ay ii tahay sharaf weyn in aan la shaqeeyo shirkadaan, erayada filimka si wanaagsan ayeey ii cajabiyeen, waana kuwii ugu wanaagsanaa ee aan maqlo ama aan aqriyo nolosheyda.
Filimku waa mid ganacsi ah oo wanaagsan aadna loogu raaxeysanao waxaana hubaa in filimkaani uu saameyn ku yeelan doono nolosheyda, sidaas waxaa yiri boqorka baashida Earaan, soo saaraha filimka ayaa sheegay in filimku yahay wax dhacay, xoogaa qosolana ay ku jirto aad ayaana ugu faraxsanahay in Emraan uu actar ka yahay ayuu yiri.
Mid kamida xubnaha sar sare ee shirkadaan soo saartay filimka ayaa yiri Emraan waxa uu kamid yahay shaqsiyaadka filimadoodu ay dhanka ganacsiga guulo ka keenaan, waana shaqsi guulo badan oo wanaagsan wuxuuna filimka ka ciyaari doonaa dowr aanu horay u soo bandhigin, la arki doone boqorka baashida waxa uu sameeyo.
This entry was posted on February 1, 2012 by jooqle in Somali News.